Ego ole ka ỊTuber blote?
Ek kwesiri ime ya?
2.1 1-Wuru na YouTube-monetisering /
3.2 Iji YouTube het Nkume Nzọụkwụ
3.3 Ịbụ gịTuber bụ ihe gbasara obi ụtọ
Tupu anyị agbada na ntinye ntinye nke ego ị na – eme ka ỊTuber, ka anyị lelee ụfọdụ n’ime ihe kachasị Ị Tubers ma chọpụta ihe ha mere kpọmkwem.
‘N Nuwe webwerf vir nuwe media, Rockstars is ‘n nuwe weergawe van YouTube, maar dit is nie ‘n nuwe webwerf nie, maar dit is ‘n goeie manier’ om ‘n goeie weergawe ‘te maak. Otu dị ka YouTuber deur PewDiePie (Felix Kjellberg), net meer as 500 500 nommers moet gediskrimineer word na ‘n nuwe 1.5 nde ekiche kwa vidio.
Ebe ọ bụ na ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ op YouTube, PewDiePie is beskikbaar op die webwerf van $ 12 vir die eerste keer in die eerste plek. Rooster Teeth Corporation, ‘n bedrag van $ 13 miljoen kwa af, ebe obere ọwa dịka Nigahiga na Epic Meal Time na $ 2,9 $ na $ 3,1 nde.
N’ozuzu, ọ bụrụ na ị bụ onye mmepụta ihe na-agbanwe agbanwe op YouTube, ị nwere ike ime ezigbo ndụ na ikpo okwu site na vidiyo gị.
Ugbu a na ị maara ndị bụ nnukwu ego op YouTube, ka anyị lelee otú ha si enweta ego ha na otu o si emetụta gị. N’ụzọ bụ isi, e nwere ụzọ abụọ dị mkpa isi rụpụta na YouTube ma ha bụ:
1-Wuru na YouTube-monetisering /
Ka anyị kwuo na i nweworị ọwa e guzobere ma bulie vidiyo ole na ole, ị nwere ike ozugbo ịmalite ịmalite op YouTube site na ịgbanwuo ya. mee ka monetisering maka akaụntụ gị na ịbanye maka Google Adsense.
Iji mee ka YouTube Monetization atụmatụ: Nbanye> OWA> Ọnọdụ na Akụkụ> Monetisering (ma ọ bụ, pịa ebe a).
N’ikpeazụ, ị ga-etinye akwụkwọ maka a Ngwakọta mmemme YouTube mmemme nke ga – enye gị uru ole na ole na akaụntụ gị, dị ka ngwá ọrụ nyocha, ngwá ọrụ nhazi ngwa njiwa eni . Iji ghọọ Onye Mmekọ YouTube, ị ga-achọ ịnweta 10,000 echiche ọha na eze na ọwa gị (ya bụ, 1.000 vidiyo na vidiyo 10) ma ya ya na YouTube ka ị bụrụ Onye Mmekọrịta YouTube mara mma.
Ozugbo i nwetachara ihe niile ahụ, anyịnwere ike ịbanye n’ikpeazụ na ole ị ga-enweta webwerf op YouTube.
Ozugbo ịmalite ịkọwa vidiyo gị, ị nwere ike ịhọrọ otú ị chọrọ ka mgbasa ozi ga-apụta na vidiyo gị na ego ole ị ga-enweta ga-adabere n’otú ndị na-ege gị ntị si emetụta ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ego op YouTube, ọ bụkwa ihe mgbagwoju anya n’ihi op YouTube na die beste.
Ide YouTube YouTube-opname (mgbe onye na-elele pịa ma ọ bụ lelee mgbasa ozi gị) yana maka ihe ọ bụla 1000, ị ga-enweta ihe $ 7,50. Nsogbu bụ otú e si gụọ echiche ahụ, ebe ọ bụ na ọ dabere na otu ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na onye na-ele anya kpebie ịkwasa site na mgbasa ozi ma ọ bụ jiri ad-blocker, ị gaghị akwụ ụgwọ maka echiche ahụ. N’ihi nke a, echiche dị elu apụtaghị na ọ bụ vidiyo na-enweta ezigbo ego. Vidio nke was 10.000 puku puku, wat 10.000 pond is, en na-asụgharị naanị $ 22.50.
Iji buli uru gị na vidiyo na mgbasa ozi, ị ga-achọ ịma nke mgbasa ozi kachasị mma nke ọdịnaya. Ọ bụrụ na ọ bụ obere vidiyo nke 3, mgbasa ozi gbasaa nwere ike ịdị mma karịa nchịkọta nke abụọ 30. N’iji mmemme Onye Mmekọ YouTube, ị kwesịrị inwe ohere ịnweta nchịkọta nchịkọta gị ntị.
N’agbanyeghị na ọ kachasị mfe ịmepụta, inweta ego webwerf op YouTube adịghị ezughị ezu n’onwe ya, nke mere ọtụtụ n’ime YouTubers na-achọta ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi enweta ego.
Ka ọ na-anọ ugbu a, ịnweta nanị op YouTube na-esiri ike karị n’ihi nke a, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ ỊTuber ịgabiga YouTube iji nweta ego ha. N’oge ahụ, ụzọ atọ dị ukwuu bụ: nkwado na ngwaahịa, ịzụ ahịa nke onwe ha, na ịba ụba.
Aha ukwu YouTubers dwe ka Iwe Joe na Jenna marbles dabere na njikọta nke atọ ahụ iji mee ihe ha na-enweta. Ndị a bụ mgbe ọtụtụ ụzọ HowTubers si enweta ụgwọ ọrụ ha kwa afọ.
Otu n’ime ọtụtụ onyinye nkwado YouTube na FameBit, dit is ‘n maka ndị okike ịchọta ohere nkwado ma nweta ego site n’ịkepụta na ikesa ọdịnaya.
Ọ bụrụ na ị kwadoro akara gị ma nwee ezigbo ndị na-eguzosi ike n’ihe, ị nwere ike ịmalite ịzụ ngwáahịa gị site na ịkọ ya na vidiyo gị. Ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke gị bụ usoro dị mfe ma dị mfe na ụdị ahịa / ọrụ ị nwere ike ịnye nwere ike ịdịgasị iche, ọ bụrụhaala na ọ gbasara ndị na-ege gị nt. Smosh, dịka ọmụmaatụ, na-emesi ọtụtụ ihe ike banyere ịzụ ahịa ma eleghị anya na-eme ka ego buru ibu ụlọ ahịa ha n’ịntanetị.
Ihe na-eme n’oge na-adịbeghị anya n’etiti ndị na-emepụta ọdịnaya bụ iji ìgwè mmadụ na-eme ihe na okpukpu abụọ kasị ukwuu na-ekpo ọkụ na-eme ugbu en Kickstarter na Patreon. Dit is ‘n ‘ngagata wat ‘n ‘n ‘n ‘n’ agbata ‘is, maar ‘n ‘n ‘n ‘n ego na ‘n akwado, wat ‘n’ ma ‘en’ ” ” ” ” ”n’ ” ‘n-na-agagharị-as is. Ntughari isi bụ ụzọ kachasị mma isi mee ka ndị na-eso ụzọ gị kwụọ ụgwọ maka ụgwọ ego dị ukwuu. Ihe atụ ole na ole nke ụgwọ a na-akwụ ụgwọ bụ nanị ọdịnaya nke ndị ọrụ akwụ ụgwọ, nkwekọrịta nke onwe onye, ​​na ngwá ahịa pụrụ iche.
Na mgbanwe ndị YouTube blote na iwu ego ya, ‘n ‘nịị na-emepụta ọdịnaya na YouTubers agbanyewo ndị na-ege ya ntị iji kwụọ ụgwọ ọrụ ha. Ntughari ego nwere ike ịbụ isi iyi ego ma ọ bụrụ na ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ma ịkwesịrị ịmara ebe ikpo okwu na-adabara ndị na-ege gị ntị.
Na Kickstarter, ị na-ebido otu oru ngo yana ego ị chọrọ iji mezue ọrụ gị. Ndị mmadụ na-ekwe nkwa na ya ma ọ bụrụ na ị jisie ike iru ihe mgbaru ọsọ gị n’ime oge imecha, ị ga-enweta ego ahụ. Mmemme Kickstarter na ebuwanye ibu na ihe ụfọdụ na-eme ka ọtụtụ nde dollar nweta ego.
Dit is nodig om ‘n ma Ama Dịka Kung oké iwe jisiri ike inweta $ 600,000 nke ego site na nkwa ya.
Ọ bụ ezie na Kickstarter na-ebute nnukwu ego ‘n na-akwụ ụgwọ, ‘n na-enye Patreon alias ka ọ dịkwuo ntakịrị ma ọ bụ na-aga n’ihu.
O yikarịrị ka ị ga-achọta YouTubers na-akpọ ụlọ Patreon dịka ọ nwere ike inye ego nkwụnye ego siri ike tụnyere Kickstarter. Dị ka Kickstarter, ị na-edepụta peeji nke nwere ihe mgbaru ọsọ na Patreon, dit wil sê, ek is in die mgbaru ọsọ bụ ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa karịa otu. YouTubers is na aanleiding van Jim Sterling na Red Media Media vir die grootste deel van die land en die grootste deel van die land, en $ 12.000, tot $ 19.000 in die Verenigde Koninkryk.
Jim Streling-na-ooi beloop $ 12.000 + kwa vir YouTube-kanaal.
Ịmara ihe ị na-achọsi ike ma bụrụ onye ọkachamara n’ọhịa ahụ ga-enyere gị aka ịmalite, ma n’ikpeazụ, ọ ga-adabere na ene na mgbalị dị ukwuu ị dị njikere itinye aka na-eto eto.
Ọ dị mfe iche na dị ka YouTubers, die niile ị ga – eme bụ ịṅa ọchị na igwefoto. Ma eziokwu nke okwu ahụ bụ, ịbụ ỊTuber pụtara ịrụ ọrụ karịrị igwefoto ịhazi ma nyochaa ọdịnaya gị, achọta ụzọ iji chebaa ya nke ọma, na ijide n’keed zur zur zur zur zur zur zur.
Iji YouTube het Nkume Nzọụkwụ
Maka akụkọ ọganihu PewDiePie, en jy het ‘n ‘narụ ndị ọzọ ị na-agbalị ima ya na YouTube en jy kan na-adị ndụ. Nke bụ ihe blote ndị na-emepụta ọdịnaya ji kpebie na ha agaghị adabere kpamkpam op YouTube dịka ihe nkesa ha.
Trek af: dit is kachasị elu nke ikpo okwu nke na-enye gị ohere ịbanye ọdịnaya gị na ndị na-ege ntị mgbe ị na-enweta ndụmọdụ na onyinye sitere na ndị na-ekiri. Iji YouTube gaa na mgbanwe n’ime ọrụ dị iche iche bụkwa ihe a na-ewu ewu na ọtụtụ ihe ỊTubers na-eme n’ime fim, telivishọn, na mgbasa ozi.
Na 201, Jimmy Tatro malitere "TheJimmyTatroChannel," nke e mesịrị gbanwere "NdụAccordingToJimmy. "Tatro is net soos Netflix usoro in die hoofrol" Amerikaanse Vandaal. "; yana vidio "Jump Street 22" na "nnukwu 2".
Ịbụ gịTuber bụ ihe gbasara obi ụtọ
Ime nnukwu ego site n’ịbụ onye ỊTuber nwere ike iyi ụda, ma ọ bụ, ma n’ikpeazụ, ihe na-eme ka ọtụtụ ndị Ị Tubers is ngide na-eme ọdịnaya abụghị ego. Ọ bụ ọṅụ nke ime ka ndị ọzọ nwee afọ ojuju.
Slegs, ih ‘na-eche? Malite na-eme vidiyo ndị ahụ!